धनुषा प्रहरीको सुरक्षामा खुलेआम मेलामा जुवातास! | अपन जनकपुर
धनुषा प्रहरीको सुरक्षामा खुलेआम मेलामा जुवातास!
जनकपुरधाम । धनुषाको बटेश्वर गाउपालिका-५ शान्तिपुरमा आयोजित दुर्गा मेलामा खुलेआम जुवातास भइरहेको छ ।
बडादसैँको अवसरमा लागेको दुर्गा मेलामा विगत एक सातादेखि जुवातास चल्दैछ । जुवा खेलाउन टेन्ट नै लगाएको छ । रातभर जुवातास चल्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । यहाँ प्रहरी सुरक्षामै जुवातास खेलाइएको छ ।
लाखौंको हारमार भइरहेको जुवातासको निश्चित कमिसन दिएकाले प्रहरी मुकदर्शक बनेको स्रोतले बताएको छ ।
शान्तिपुरको दुर्गा मेलालाई ‘जुवा मेला’ पनि भन्ने गरिन्छ । हरेक वर्ष यहाँ जुवा खेलाइन्छ । जुवा आयोजना गर्नेहरु ‘बाउन्सर’ समेत राखेका छन् । जुवातास खेलिरहेको फोटो खिच्न रोक लगाइएको छ । स्थानीयका अनुसार कसैले दृष्य कैद गरेका थाहा पाए बाउन्सरले मोवाइल वा क्यामेरा खोस्छन् ।
धार्मिक मेलामा खुल्ला मदिराको अवैध कारोबारसमेत भइरहेको छ । प्रशासनले ‘आरकेस्ट्रा’ प्रोग्राममा प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर यहाँ किशोरीहरूलाई ल्याएर ‘आरकेस्ट्रा’ प्रोग्राम गरिन्छ । मदिरा सेवन गरेर जुवाडेहरु रातभर जुवातास खेल्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
इलाका प्रहरी कार्यालय महेन्द्रनगरको टोली मेलामा सुरक्षार्थ खटेका छन् । मेलामा केही युवाबीच गएराति विवाद हुँदा महेन्द्रनगरका इन्सपेक्टर तिलक सुनार आफैं पुगेका थिए । तर, जुवातास खेलिरहेपनि नदेखे झैं गरेर फर्किएका छन् ।
इन्सपेक्टर सुनारले मेलामा जुवातास भइरहेको गलत रहेको दावी गरे । उनले भने, ‘तपाईंलाई कसैले गलत भन्यो । म अहिले पनि मेलामै छु । जुवातास चल्दैन ।’
प्रकशित मिति : 2021-10-15